यसो भन्छन् विष्णुका समकक्षी - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
यसो भन्छन् विष्णुका समकक्षी
विष्णु माझीसँग सर्वाधिक गीत गाउने गायक हुन्– कुलेन्द्र विश्वकर्मा । अहिलेसम्म ४ सय गीतमा स्वर दिइसकेका यी गायकले आफैं विष्णु माझीसँग खुलेर कुरा गर्न नपाएको वर्षौं भैसकेको छ । गत असारमा कुलेन्द्र आफैंले सालको पातको टपरी गीतका लागि विष्णु माझीलाई ५० हजार रुपैयाँ बुझाए, स्टुडियोभित्रै । हामीले गीत गाउनुपरे उहाँका श्रीमान् सुन्दरमणिजीसँग सम्पर्क गर्ने हो, विष्णुजीलाई फोन गर्ने चलन छैन ।
कुलेन्द्र भन्छन्, ‘मलाई भित्री रहस्य त थाहा भएन तर म आफैंले उहाँसँग यति धेरै गीत गाउने अवसर पाए पनि अहिलेसम्म मज्जाले कुराकानी गर्न पाएको छैन ।’ चर्चित गायिका तथा सांसद कोमल वलीले पनि अहिलेसम्म विष्णु माझीसँग गफ गर्न पाएकी छैनन । ‘करिब १० वर्षअघि हो, काठमाडौंको एक स्टुडियोमा भेट भएको थियो, वलीले भनिन्, ‘त्यतिवेला उनले दिदी नमस्ते भनिन्, मैले नमस्ते बैनी भनेँ त्यसपछि उनले केही भनिनन् ।’ वलीका अनुसार १५ वर्षअघि लोकदोहोरी गीत प्रतियोगितामा भाग लिन बुटवल जाँदा एकपटक उनीसँग भेट भएको हो, त्यसको ५ वर्षपछि काठमाडौंमा भेट भयो, त्यसपछि अहिलेसम्म भेट भएको छैन । फोन वार्ता हुने कुरै भएन ।
गायिका वली भन्छिन्, ‘विष्णु माझीले आफू कुनै अफ्टयारो स्थितिमा रहेको बताए उद्धार गर्न सकिन्थ्यो अन्यथा अर्काको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा किन चासो राख्ने ?’ नेपाल खुल्ला भैसकेको छ, कसैले बन्देजमा राखे केही दिन बन्दी होला तर सधैंभरि हुन सक्दैन, विष्णु माझी आफ्नै कारणले बाहिर नआएकी हुन् कि ? विष्णु माझी निकट एक गायिका भन्छिन्, ‘परिवारले अन्तर्वार्ता तथा भिडियोका माध्यमबाट दर्शकमाझ आउन नदिएका हुन् । विष्णु दिदीसँग मैले नभेटेको पाँच वर्ष भैसकेको छ ।’ गायक नवीन पौडेलले २०६५ सालमा गीत रेकर्ड गराएपछि अहिलेसम्म विष्णु माझीसँग गीत गाउन पाएका छैनन् । उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोजेको धेरै भयो ।
पौडेल भन्छन्, ‘उहाँसँग गीत गाउने हो, हामी कुनै अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्ने, भेट्ने अनि पैसा बुझाउने काम कसरी गर्न सक्छौं ? गायक पौडेल भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं स्टुडियोमा भेट भए पनि नचिनेको व्यक्तिजस्तो चुपचाप रहनुहुन्छ अनि हामीले के भन्नु ? आजभोलि त धेरैले बुझिसके, बोल्नै छोडिसके ।’ एकनारायण भण्डारी र विष्णु माझी दुवैको घर स्याङ्जा हो । घर एउटै जिल्लामा भए पनि यी गायिकाका बारेमा गीतकार भण्डारीसँग समेत खासै केही जानकारी छैन । भण्डारी भन्छन्, ‘मलाई त केही थाहा छैन । भेट पनि हुँदैन । फोनमा समेत कुराकानी हुँदैन ।’ विष्णु माझीसँग केही काममा सहकार्य गरेपनि नजिक भएर गफगाफ भने नभएको भण्डारीले बताए ।
मसँग पनि बोल्नुहुन्न भन्छन् बद्री पंगेनी
विष्णु माझी ठूलै अन्यायमा परेको खबर निरन्तर आइरहेको छ, खास कुरा के हो ?
मलाई यस विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कसैले केही भनेको छैन । न प्रतिष्ठानमा विष्णु माझीको उजुरी आएको छ । उहाँले अन्यायमा परेको उजुरी दिए हामीले केही गर्ने हो ।
उहाँ प्रतिष्ठानको सदस्य हो ?
होइन । उहाँले प्रतिष्ठानको सदस्यता लिनुभएको छैन । लोक तथा दोहोरी गायिका भएका नाताले यदी उहाँले आफू दबाबमा कठिन जीवन बाँचिरहेको उजुरी दिनुभयो भने हामी उहाँका लागि लड्न तयार छौं ।
तपाईंसँग कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ होला, केही भन्नुहुन्न ?
उहाँका बारेमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ । कहिलेकाहीं उहाँसँग ठ्याक्कठुक्क भेट हुन्छ तर मसँग पनि बोल्नुहुन्न । मैले देखेअनुसार उहाँ सुन्दरमणि अधिकारीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ, गीत रेकर्ड गराउनुहुन्छ अनि लगत्तै निस्कनुहुन्छ ।
विष्णु माझीले जे गरिरहनुभएको छ यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
खासमा भैरहेको के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । सुन्दरमणिजीले दबाबमा राख्नुभएको हो कि उहाँ आफैं राजीखुसीले त्यसरी बस्नुभएको हो अथवा यसका अन्य केही कारण छन् त्यो कसैलाई थाहा छैन । एउटा गायकका नाताले म पनि भन्छु— संसारमा जतिसुकै ठूलो सेलिब्रेटी पनि प्रशंसकहरूसँग नजिक हुन चाहन्छ । अब विष्णु माझीको हकमा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने हामीले केही बोल्न मिल्दैन । मिडियामा अन्तरवार्ता दिने–नदिने, कसैसँग बोल्ने–नबोल्ने, तस्बिर खिचाउने–नखिचाउने उहाँको खुसीको कुरा हो । जबर्जस्ती कोट्याउनु भएन ।
बद्री पंगेनी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान
भन्नेले के के भन्छन् रमाइलो प्रेम कथा